'စောင့်ရှောက်မှု' သည်အမှန်တကယ်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကြောင့်လူငယ်များအဖွဲ့အစည်းများသည်ကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိပေးနှိုးဆော်သံရှိသလား။ : Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	နိုဝင်ဘာလ42019 အပေါ်	• 11 မှတ်ချက်
၀ န်ကြီး Sander Dekker (လူတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးယောက္ခမလို့ထင်မြင်နိုင်ပေမယ့်သိုးရဲ့အဝတ်အစားမှာ ၀ ံပုလွေဖြစ်ချင်တဲ့တရားသူကြီးတွေကိုမင်းသိတယ်) တုန်လှုပ်သွားတယ် လူငယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အဖြစ်အပျက်များ၏ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ Sander ။ ဒါဆိုရင် George Orwell ကသူ့စာအုပ် 1984 မှာတစ်ခုခုရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ် အသစ်သောအသံဖြင့် ဟုတ်တယ် ထိုစာအုပ်တွင် 'စောင့်ရှောက်မှု' ကဲ့သို့သောစကားလုံးများသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုသည်ဟုရှင်းပြထားသည်။ ငါကြည့်ပြီးသား 2013 ရှိ“ လူငယ်စောင့်ရှောက်မှု” setting တွင်ကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်ကင်မရာရိုက်ကူးခြင်းဖြင့် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ) ။ Heerhugowaard ရှိထိုအဖွဲ့အစည်း၏ဒါရိုက်တာသည်ထိုအသံသွင်းမှုကြောင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရပြီးနည်းဥပဒေများကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အဓိကအားဖြင့်ကင်းထောက်များသည်အနာဂတ်တွင်ကင်းထောက်များကိုအနာဂတ်တွင် ပို၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထိုဗီဒီယိုသည်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများ၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း၏သမီးသည်ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်အဆုံးသတ်သွားသောအခါကျွန်ုပ်ဒီမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သူမမှာအဖျားရှိလို့ကျွန်မတို့ကိုအတော်လေးဝန်ခံရပြီးကျွန်တော်ဟာလျှို့ဝှက်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တယ်။ သူမအိပ်ရာမွေ့ရာမှာဝှက်ထားသည့်မှောင်ခိုတင်ထားသောတယ်လီဖုန်းဖြင့်သူမအိမ်နီးချင်း (အဖွဲ့အစည်း၏ ၀ န်ထမ်းများ) မှအလွဲသုံးစားမှုကိုအသံသွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ဗွီဒီယိုအဆုံးမှာသင်ကြားရလိမ့်မယ်။ ဗွီဒီယိုရဲ့ပထမပိုင်းမှာသူမတံခါးအပြင်ဘက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုသူဘယ်လိုအစီရင်ခံရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်မှာဘာမှအလေးအနက်မထားပေမယ့်ခက်ခဲတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အချိန်သို့မဟုတ်အိမ်မှာအခြေအနေရှိသူဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်။ ပြီးတော့ဒါကလျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်နဲ့မျက်နှာဖုံးရဲ့အစွန်အဖျားပဲ။ ဒီအင်စတီကျု့ကို (တစ်ခုတည်းသော) ယခင်နေထိုင်သူများစွာကကျွန်တော့်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကဒီကမ္ဘာကြီးထဲကနေပဲ။ စင်ကြယ်သောထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ဘယ်သူမှမမွငျ! သပ်ရပ်သောဥယျာဉ်များနှင့်သပ်ရပ်သောအဆောက်အ ဦး များ၊ သို့သော်၎င်းအတွင်း၌မြေကြီးပေါ်တွင်ငရဲဖြစ်သည်။
အရင်တုန်းကမင်းကိုပုံမှန်မြီးကောင်ပေါက်တစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာမင်းဟာအထီးကျန်တဲ့ဆဲလ်ထဲမှာပိတ်ထားတယ်။ အကယ်၍ သင်၏မိဘများကသင့်ကိုအိမ်တွင်ပိတ်ထားမည်ဆိုပါကသူတို့သည်သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကသင့်အား“ နာကျင်မှုလှုံ့ဆော်မှု” (ဖတ်ပါ - တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရိုက်ပါ) သို့မဟုတ်အထီးကျန်နေသောဆဲလ်အတွင်းမှတောက်ပနေလျှင်၎င်းသည်ပညာရေးနှင့်“ လိုအပ်သော” ဖြစ်သည်။ အဲဒါရုတ်တရက်ကောင်းလား ငါတို့ဘယ်ရောက်နေပြီတုန်း။
ဤလူငယ်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများ၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်သည်အပေါင်ခံခြင်းသို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် Nike ၏သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးဆက်များကိုပေးဆပ်ရန်အပယ်ခံပုံရသည်။ ပုံမှန်လစဉ်လစာသည်သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုတိတ်ဆိတ်စေသည်ဟုပြင်းထန်စွာပုံရသည်။ ပျမ်းမျှလူငယ်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သား၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်သည် 'befehl ist befehl' ၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုသင်သည်ထိုစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုတွေ့ရှိပြီးထိုအရာအတွက်စစ်မှန်သောနှလုံးသားရှိသူများစွာလည်းရှိသည်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လာပါလိမ့်မည်။ ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူငယ်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေများလွန်းတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ငါလူငယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေး: ငါအလွန်များစွာသောဆိုလိုတာကပြန်လည်ထူထောင်ရေး) တိုင်ကြားချက်အများအပြားလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဖော်ပြရန်အလွန်များလွန်း! ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားချက်တွေအားလုံးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာရုံစိုက်ဖို့ပုဆိန်ကိုငါပစ်ခဲ့ရတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုများစေသည်။
ကျနော့်အမြင်မှာတော့လူငယ်စောင့်ရှောက်မှုဟာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ လူသားထုကိုလျစ်လျူရှုထားသည့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပညာရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများအားကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသည်။ ကောင်းပြီမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သေခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်အတွက်ဖြစ်ပျက်; တံခါးပိတ်နှင့်သပ်ရပ်သောဥယျာဉ်များနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ နေအိမ်ကောင်းကောင်းမနေကောင်းကောင်းနေနိုင်သည့်“ လှည့်ဖြားဆဲလ်များ” အပါအ ၀ င်“ နာကျင်မှုလှုံ့ဆော်မှု” များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲသောမြီးကောင်ပေါက်များကိုပိတ်ထားခြင်းသည်အလယ်ခေတ်ထက် ပို၍ ဆိုးသည်။ ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သော ၀ န်ကြီးတစ် ဦး သည်မှန်မှန်မှန်၊ မှန်မှန်ဝတ်စုံနှင့် ၀ တ်စုံပါ ၀ င ်၍ သူသည်“ အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်” ဟုပြောနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ 'beh' ဟုပြောသောသိုးအဝတ်အစားရှိဝံပုလွေမဟုတ်ပါ။ လူငယ်စောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုလုံးသည် ၀ န်ဆောင်မှုများမှ ၀ င်ငွေများရှာဖွေခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံများများချဲ့ထွင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည် ၏ကျောဖြတ်ပြီး အပြစ်မဲ့အားနည်းချက်ကလေးများ။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာသည်!
ငါပြောချင်တာကမင်း Sander Dekker ဟာကောင်းမွန်တဲ့အခန်းတစ်ခုမှာနေတယ်။ (ထိုကဲ့သို့သော "အဖွဲ့အစည်း" တွင် PIN နံပါတ်သော့တစ်ချောင်းမရှိသောကြောင့်) ထိုကဲ့သို့သောလူငယ် "စောင့်ရှောက်မှု" ဌာန၌။ အအေးခံရန်အထီးကျန်နေသောဆဲလ်ထဲသို့လေ့လာရန်လေ့လာရန်အတွက်လက်မောင်းသို့မဟုတ်လည်ပင်းညှပ်ပါ။ (ဖတ်ပါ - ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေသောကုန်သွားပြီးစိတ်ပျက်စရာ) ။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့လည်စည်းနှင့်အတူသင်၏လှပသောဝတ်စုံ၌သင်တို့ကိုနောက်တဖန်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်။ သင်ဆဲချတ်များရှိသေးလားကြည့်ပါ ဦး ။
သင့်ကိုယ်သင်ဤသို့မေးနိုင်သည် - လူငယ်များအတွက်“ စောင့်ရှောက်မှု” ၀ န်ထမ်းများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပိုမိုပေါ်ပေါက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဤ ၀ န်ထမ်းများသည်သူတို့၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုပိုပိုပြီးဆုံးရှုံးသွားပုံရခြင်းသည်ထူးဆန်းပါသလား။ လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများကိုတရားမျှတစေရန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်မဟုတ်သောအဆင့်သို့မြင့်တက်စေရန်လူတိုင်းလူတိုင်းအချင်းချင်းလက်ချင်းတွဲကိုင်တွယ်နေပုံရသောနယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။ သြတ္တပ္ပစိတ်ပြန်လည်ရရှိရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောထိတ်လန့်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အဘယ်သူသည်တံခါးပိတ်သနည်း။ ဘယ်သူဘယ်သူလဲ (ဒါ့အပြင်မှတ်ချက်များအတွက်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ)
source link ကို entries တွေကို: nu.nl
ပိုပြီးရဲကိုပြည်နယ်နှင့်နည်းပါးလာအခွင့်အရေးအတွက်မိုက်ကယ် P. အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး psyop "ပြဿနာတုံ့ပြန်မှုဖြေရှင်းနည်း ''
အသနားခံစာ: မသင်မနေရစိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်မာကု Rutte နှင့် Sander Dekker အန်းတေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးကိစ္စတွင်
သင့်ရဲ့ကလေးဦးသေဆုံးပြီးသင်သာယနေ့အာဏာရ Yasmin အမ်၌ရှိသကဲ့သို့2နှစ်ပေါင်း get
ပို. ပို. လူတွေပြည်နယ်ပျောက်ကွယ်သွားဝေဖန်သောပြည်နယ်အတွက်အလုပ်လုပ်
Tags:: ကယ်နုတ်ပါ, Dekker, အထူးပြုလုပ်ထားသော, heerhugowaard, လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ, လူငယ်, ဝန်ကြီး, tocsin, Sander, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများ
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 05: 26
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 06: 35
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်။ ။ Facebook သည်ဤမက်ဆေ့ခ်ျကိုလူတို့၏အချိန်ကာလတွင်ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်“ အရေးမကြီး” (ပြည်နယ်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုဖတ်ပါ) ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်မေးလ်၊ WhatsApp သို့မဟုတ်အခြားအရာများဖြင့်လည်းမျှဝေပါ။
အဆိုးဆုံးကတော့ဆောင်းပါးများကိုဝေမျှရန်မဝံ့မရဲဖြစ်နေသောလူအများစုက ... အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသူများကိုယ်တိုင်အရှက်ရသင့်တယ်ဆိုတာကိုသိမည့်အစားအခြားသူများကသူတို့ကိုပြောင်လှောင်ကြလိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 06: 54
မတရားမှုကိုတိုက်ဖျက်သည်ဟုစွပ်စွဲသောအစိုးရများသည်အလားတူကြီးမားသောမတရားမှုကိုမည်သို့ထပ်တလဲလဲပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ကြိမ်တွေ့မြင်ရသည်။ မဟာမိတ်များကနာဇီများကိုမောင်းထုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသော်လည်းစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် Winston Churchill သည် Dresden ကိုဗုံးခွဲခဲ့သည်။ နာဇီတွေဟာလူတွေကိုဘာမျှမသတ်ဖြတ်ဘဲသတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ကယ်တင်ရှင်တွေကလည်းအတူတူပဲ။ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာကိုမည်သူအမှန်တကယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဆိုသောမေးခွန်း မှလွဲ၍ (အမေရိကန်မှလာသည့်ဇီယွန်ဝါဒီငွေများမဟုတ်လော) - နာဇီဝါဒသည်အစဉ်တည်ရှိခဲ့သလား။ ဒါမှမဟုတ်အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ၏မြင်ကွင်းမှပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသည်ချိုမြိန်နေသောဒီမိုကရေစီဂျာကင်အင်္ကျီတွင်ဖက်ဆစ်ဝါဒပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၏အစဖြစ်ခဲ့သလား။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ပုံရိပ်များကျန်ရှိနေသည်။ စစ်ကြီးပြီးသွားသည့်နောက်တွင် (မဟာမိတ်များဖြစ်သော "ကယ်တင်ရှင်များ" ၏ရိုက်ချက်များကိုကြည့်ပါ)
ဆိုဗီယက်ပြန်လည်ပညာပေးစခန်းများသည်ယနေ့ gulag ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမရှိတော့၊ နာဇီချွေးတပ်စခန်းများမှာကြမ်းတမ်းသောအသွင်အပြင်မရှိတော့ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်၎င်းကို GGZ ဆေးခန်းသို့မဟုတ်လူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနဟုခေါ်သည်။ ငါတို့ဟာနည်းနည်းပိုပြီးရှုပ်ထွေးပြီးအရာအားလုံးကိုကောင်းမွန်တဲ့ Orwellian talk-jacket ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်သြတ္တပ္ပစိတ်ကဘယ်သူမှစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူး။ အိမ်ရှေ့တံခါးကသပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ဥယျာဉ်ကသန့်ရှင်းသပ်ရပ်တယ်။ အခန်းတံခါးကလှပတဲ့အလှဆင်မှုနဲ့ pin lock ရှိတယ်။
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 06: 59
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 07: 07
သေဆုံးသူ ဦး ရေမှာတရားဝင် 25 တစ်ထောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Churchill ၏ "သမိုင်းသည်အောင်နိုင်သူမှရေးသားသည်" ဟူသောအယူအဆအပေါ်အခြေခံသည်။
တကယ်တော့ဒီဗုံးခွဲမှုအပြီးမှာကျနော်တို့ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူပေါင်းတစ်သန်းအထိသေဆုံးမှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။ သို့သော်၎င်းသည်နံပါတ်များကိုခေါ်သောနာဇီလက်သစ်များဖြစ်သည်ဟုထပ်မံပြောဆိုခဲ့သည်။ အောင်နိုင်သူသည်သမိုင်းစာအုပ်များကိုပြန်လည်ရေးသည် (နှင့်၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားလာသည်) ။
၎င်းသည်ဖော့စဖရပ်စ်ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲသည့်ကြီးမားသောလှိုင်းလုံးကြီးများနောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်တွင်အသက်ရှင်လျက်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုအမြစ်ပြတ်တိုက်ထုတ်သည့်ကြီးမားသောမီးလောင်မှုများဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်။ စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီ။
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 07: 27
ကျွန်တော်တို့ဟာမှားယွင်းတဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြသရန်၊ လူများကိုထောင်ချပြီးဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ပို့ဆောင်သောအစိုးရဖြစ်သည်။ ထိုစခန်းများသည်အနည်းငယ်ပိုသာ။ ကြည့်ကောင်းပြီးကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည့်ဌာနရှိကြသည်။ ၀ န်ထမ်းများမှာသပ်ရပ်သောလစာ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသော volkswagen နှင့်သပ်ရပ်စွာရိတ်သိမ်းထားသောဥယျာဉ်ခြံရှိသည်။
၀ န်ထမ်းများ၏သိစိတ်ကိုလစာဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပြီးပါတီများနှင့်ပါတီများ၊ ကော်ဖီစက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေပေးသည်။
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 07: 58
Grappemaker သည် Wiersum psyop ပြီးနောက်၎င်းအတွက်အရသာရှိသည်
Dresden နှင့်ပတ်သက်လျှင် ... ပုံမှန်အားဖြင့်သံသယရှိသူသင်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 16: 05
ပြproblemနာဟုခေါ်သည့်အခါတိုင်းသင့်အားဖြေရှင်းခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်ခေါ်ဆိုမှုကိုသင့်အားအကြမ်းဖက်တုန့်ပြန်စေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပိုမို၍ တင်းကျပ်သောဥပဒေများပေါ်ပေါက်လာသည်။ လူငယ်တစ် ဦး စောင့်ရှောက်မှုန်ထမ်းများအတွက်ပိုပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့် Idd ။ တံခါးဖွင့်ပိတ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိ၊ မရှိဆိုသည်မှာလုပ်ပါ။ အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်မသမာသောအရိပ်အကဲမှတစ်ဆင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူတို့၏ဝါကျကိုတွန်းအားပေးသည်။ သင့်ကိုချဉ်းကပ်ပြီးအမေရိကန်လူမျိုးအများဆုံးအထီးကျန်အကျဉ်းသားကဲ့သို့သစ်တိုင်နီးပါးကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်။ သငျသညျတကယ်ထိုကဲ့သို့သော setting တွင်အရာဖြစ်ကြ၏။ ကောင်းတဲ့လူ့ဘောင်၊ ဟဲဟဲဟုတ်ကဲ့ befelhl befelh software ကိုနောက်တော်သို့လိုက်လိုက်ပါတယ်, ကနေသွေဖည်အလွန်မြင့်မားသောခြွင်းချက်စဉ်းစားသည်။ ခြွင်းချက်များသည်သူတို့၏စနစ်များတွင် "bug များ" သာဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်ကလေးများမရှိကြပါ၊ သို့သော်စာအုပ်တစ်အုပ်အရသူတို့က“ အငယ်” နှင့်အတူသွားလိုကြသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုလိုအသံထွက်နီးပါးလား။ သင်က၎င်းကိုသင့်တော်သောအကွာအဝေးတစ်ခုတွင်ထားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏မိသားစု၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံချက်မရှိတော့ပါ။ ရုံတကယ့် max ကိုအကျဉ်းသားများကဲ့သို့။ သင်ဟေးဘယ်တော့မှမ?
ဟေးမာတင်နှင့်ထပ်မံအသိပညာများအတွက် thx ။ သင့်ရဲ့ဗဟုသုတကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တစ်ခါတလေမင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုမျှဝေပေးတယ် ဒါပေမယ့်ငါကငါရူးနေပြီလို့ထင်တယ် ဒါမှမဟုတ်လူတွေဟာအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ပူနေကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေပေါ်လာတယ်။ သိပ္ပံပညာသည်မည်မျှမြင့်မားသည်ကိုအချို့သောအမြင့်မှသိမှတ်မှုဆိုင်ရာဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းစတင်သည်အထိသို့မဟုတ်ခေါင်းသည်သဲထဲမကျမချင်းထိရောက်စွာအရေးမထားပါ။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသင့်ကိုလှည့် ဒီဆောင်းပါးတွေကိုကိုးကားတဲ့အခါငါတောင်မှဒီကိစ္စကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။
သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာကိုသင့်ရဲ့ paws တွေနဲ့မထိပါနဲ့။ သင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပေးလို့ရမလား
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 18: 43
သင့်ထံမှကောင်းသောတုံ့ပြန်မှု။ ကောင်းပြီ, ပုံမှန်လူ ဦး ရေကနေဂျက်လေယာဉ်တွေကိုမျှော်လင့်ဖို့ခဲယဉ်းသည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြောက်လန့်သောကြောင့်။ အုပ်စု၏ဖိအားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာနှင့်သတ်မှတ်ထားသည့်အစီအစဉ်များအတိုင်းလိုက်နာခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုဖြစ်နိုင်သမျှနေရာရွှေ့ပြောင်းပစ်နိုင်သည်။ နယ်သာလန်, Madurodam, ယခင် GDR ထက်ပိုဆိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီမှာသူတို့ဟာစမတ်ကျတယ်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားသောသဘောထားကွဲလွဲမှုများသည်သပိတ်မှောက်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ နှုတ်ဆိတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေရာရာကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေလျှင်၊ သင်သိသောထိုခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ယောက်ျားများကညွှန်ကြားသည်မှာသိသာထင်ရှားသည့်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲကောင်းတွေကတုပ်ကွေးရောဂါမှာမလှုပ်ရှားနိုင်လို့ပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အခြေအနေကိုနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့ထိန်းသိမ်းထားရလို့ပါပဲ။ သာမာန်လူ ဦး ရေကထိုပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ ဇာတ်ညွှန်းကိုလိုက်နာရမည်။
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 19: 10
အဲဒါတွေအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်ထားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ အိမ်နီးချင်းများကိုရှုပ်ထွေးသောလူတစ် ဦး အဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်ဟုဥပဒေကပြthe္ဌာန်းလိုက်သည်ဆိုပါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်တရားသူကြီးသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါဆရာဝန်၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲသင်နှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်မှ Thijs H. PsyOp၊ Ruinerwold PsyOp နှင့်အခြားသူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
GGZ ၀ န်ထမ်းအသစ် (အစောင့်အသစ်) အနေဖြင့်ကောင်းမွန်သောလူနေမှုဘ ၀ တွင်ဝင်ငွေရှာနေစဉ်အတိုက်အခံများကိုဤနည်းအတိုင်းသင်ရှင်းလင်းသည်။
4 မှနိုဝင်ဘာလ 2019 07: 50
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ဟာတိတ်ဆိတ်ပြီးသိမ်မွေ့တဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာနေတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ အစိုးရအပြောင်းအလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးလျှင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှည်လျားလွန်း။ ကောင်းမွန်သောဘဝ၌နေထိုင်သည့်အဓိကရာထူးများမရှိတော့လျှင်လူ ဦး ရေသည်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်နိုင်သည်။
« NASA မှဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သောတွင်းနက်သည်ပလာစမာ Plasmid ဖြစ်သည်
Martin Vrijland စာအုပ်သစ်ကို“ ငါတို့မြင်သည်အတိုင်းအဖြစ်မှန်” ဖြန့်ဝေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ »